चर्चित मोडल मन्जिता केसी र बिमल राज पौडेलको अभिनयमा ” झर्यो झरना ” भिडियोसहित सार्बजनिक::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
चर्चित मोडल मन्जिता केसी र बिमल राज पौडेलको अभिनयमा ” झर्यो झरना ” भिडियोसहित सार्बजनिक
काठमाडौँ – लोक दोहोरी क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउन सफल तथा चर्चित गायक हुन बिमल राज पौडेल । लामो समयदेखि लोक गीतको विधामा गायनमा राज गर्दै आएका बिमल राज पौडेलको आबाज तथा अभिनयमा मा नयाँ गित सार्बजनिक भएको छ । गायन क्षेत्रमा अब्बल सावित गरेका पौडेलका विभिन्न गीतहरुले बजारमा धमाका समेत मच्याएका छन् ।
नेपालका ख्यातिप्राप्त चर्चित गायक बिमल राज पौडेल र गायिका पूर्ण कला बिसीको एकदमै राम्रो गीत ‘झर्यो झरना’ सार्बजनिक भयको छ ।
बिमल राज पौडेलकै लय रहेको यस गीतमा शब्द भने केशब सापकोटाको रहेको छ । आज मात्र जनता डिजिटल & फिल्म मार्फत बजारमा सार्बजनिक भएको गितले मायाँ केहो ? मायाँ कस्तो हुन्छ ? भनेर देखाउन खोजिएको छ ।
उक्त भिडियोमा मोडल मन्जिता केसी र बिमल राज पौडेलकै जोडदार अभिनय देख्न सकिन्छ । सम्पादक अमृत चापागा को सम्पादन तथा मुकेश हुमागाईंको छायांकन र निर्देशन साजन पराजुलीले गरेका छन् । उक्त भिडियो जनता फिल्मको ब्यानरमा निर्माण भयको छ । प्रस्तुत गीतलाई मिडियाडबलीको तर्फबाट धेरै बधाई तथा शुभकामना ।